1. စခရင်ရိုက်ကူးရန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုမသိသေးသော်လည်း၎င်းကိုဖန်သားပြင်ဟုခေါ်ဆိုခြင်းမရှိသေးသော Mac သုံးစွဲသူများအတွက်။ screenshots တွေကိုဖမ်းယူဖို့နည်းလမ်းရှာနေသူတွေအတွက်ဒီဆောင်းပါးကိုဖတ်ရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ window တစ်ခုလုံးဒါမှမဟုတ် screen ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသာဓာတ်ပုံရိုက်ယူလို့ပါ သင်ထင်သလောက်မခက်ခဲပါ! Mac တွင်ပုံတစ်ပုံရိုက်ခြင်းကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမည့်အရေးကြီးဆုံးသော့များထဲမှတစ်ခုမှာ - ● command၊ shift ●နံပါတ် ၃ ●နံပါတ် ၄ ●နံပါတ် ၆ ●ထိုသော့တည်ရှိသည့်နေရာလွတ်။ Mac Pro, iMac, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini စတဲ့ Mac မော်ဒယ်လ်အားလုံးနဲ့ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။ ဖန်သားပြင်ကိုယူရန်နည်းလမ်းအချို့ကိုဆက်လက်လေ့လာကြပါစို့။ သင်တစ်ချိန်တည်းမည်သည့်အရာကိုနှိပ်ရမည်နည်း။ ပြီးတော့ဖန်သားပြင်တွေရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ပုံစံရှိပါသလား။
2. Command and Shift ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးကိုင်ထားပါ။ နံပါတ် ၄ ကိုနှိပ်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာနှိပ်လိုက်ရင် Mac က + sign ကိုပြပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ mouse ကိုနှိပ်ပြီးကိုင်ထားတဲ့နေရာကိုဆွဲပါ။ ထို့နောက်ပုံ လိုချင်သောတည်နေရာပြီးဆုံးသောအခါတိကျသောနေရာတစ်ခုကိုဖမ်းယူလိုသည့်အခါသင့်တော်သည့် mouse ကိုလွှတ်ပါ။ "snap" sound ကိုသင်ကြားတဲ့အခါအဲဒါကပြီးပြည့်စုံပြီလို့ဆိုလိုတယ်။ ရိုက်ယူထားသောဓာတ်ပုံကို desktop ပေါ်တွင်ချက်ချင်းသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။
3. လက်ရှိဝင်းဒိုး၏ပုံကိုဖမ်းယူပါ။ Command နှင့် Shift ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဖိကိုင်လိုပါကနံပါတ် ၄ ကို နှိပ်၍ လက်များအားလုံးကိုလွှတ်လိုက်ပါ။ ကင်မရာပုံရိပ်ကိုဖွဲ့စည်းသောအခါ Spacebar (သင် Spacebar ကိုမနှိပ်လျှင် + ပေါ်လိမ့်မည်) ကနောက်လိုက်လိမ့်မည်။ လျှောက်လွှာတစ်ခုစီ၏တိကျသော ၀ င်းဒိုးကိုဖမ်းယူရန်သင့်တော်သောပုံကိုဖမ်းယူရန်လိုသည့် ၀ င်းဒိုးကိုနှိပ်ပါ။ "snap" sound ကိုသင်ကြားတဲ့အခါအဲဒါကပြီးပြည့်စုံပြီလို့ဆိုလိုတယ်။ ရိုက်ယူထားသောဓာတ်ပုံကို desktop ပေါ်တွင်ချက်ချင်းသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။
4. Mac တစ်လုံးလုံးကို screen အပြည့်ဖြင့်ရိုက်ကူးပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် Command နှင့် Shift ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဖိထားပါ။ နံပါတ် ၃ ကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းသည်မျက်နှာပြင်အပြည့်ရိုက်ယူရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထိုမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအရာအားလုံးကိုလုံးလုံးပြသလိမ့်မည်။ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုလျှင်သင့်တော်သည်။ "snap" sound ကိုသင်ကြားတဲ့အခါအဲဒါကပြီးပြည့်စုံပြီလို့ဆိုလိုတယ်။ ရိုက်ယူထားသောဓာတ်ပုံကို desktop ပေါ်တွင်ချက်ချင်းသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။
5. Touch Bar နှင့်ပါရှိသည့် MacBook Pro မော်ဒယ်များတွင် Touch Bar ၏ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ပါ။ Touch Bar ပါသော MacBook Pro ကိုအသုံးပြုသူမည်သူမဆို Touch Bar ၏စခရင်ရိုက်ကူးနိုင်သောကြောင့်အနည်းငယ်တိုးတက်မှုရှိလိမ့်မည် !! Command and Shift ခလုတ်ကိုဘယ်လိုနှိပ်ရမယ်၊ နံပါတ် ၆ ကိုနှိပ်လိုက်ရင် "Snap" ဆိုတာကဖမ်းယူခြင်းပြီးဆုံးပြီလို့ဆိုလိုတာပါ။ ဖမ်းယူထားသောပုံရိပ်ကိုချက်ချင်း Desktop တွင်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ အကယ်၍ သင်ဖမ်းမိသောဓာတ်ပုံကိုချက်ချင်းတည်းဖြတ်လိုပါက cap ပြီးဆုံးသောအခါသင်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Mac သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ထိုပုံကို Desktop သို့မသိမ်းမီအကြံပြုလိမ့်မည်။ သင်ရေးလိုလျှင်သို့မဟုတ်အရေးကြီးသောအချက်များကိုမှတ်သားလိုပါက ၎င်းကိုချက်ချင်းပြင်ဆင်နိုင်ပြီး၊ Mac အသုံးပြုခြင်း၏အခြားနည်းစနစ်များကိုသိလိုသူများအတွက်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ အတူတကွဆက်လုပ်ရန်ကိုမမေ့ပါနှင့်။ သင့်တွင်ကောင်းမွန်သောနည်းစနစ်များစွာရှိကြောင်းသေချာပါစေ။